မှန် CT ဆဲလ်ဖုန်းဥပဒေ | မောင်းနှင်နေစဉ်တွင်စကားပြောသို့မဟုတ်စာသားမနေပါနဲ့
ကော်နက်တီဆဲလ်ဖုန်းဥပဒေ: ဖွယ်ပြောစကား / Text & ယာဉ်မောင်းဖမ်းမိ Get မနေပါနဲ့
by ကင်မ် Knox Beckius
အောက်တိုဘာလ 1, 2005 တွင်, Connecticut ရဲ့ပထမဆုံးဆဲလ်ဖုန်းဥပဒအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုယူ။ ထိုအသေး, ပြည်နယ်တစ်ဝှမ်းသင်သည်မော်တာအဖြစ်, ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးသည်ဖြည်းဖြည်းအပေါ် ခရီးစဉ်ကားမောင်းကျဆုံးခြင်းသစ်ရွက် , သင်ဆဲသူတို့ကတခြားတွေနဲ့ခုတ်မောင်းနေစဉ်အတွင်းတဦးတည်းလက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏နားရွက်သို့မဟုတ်စာတိုပို့မှဆဲလ်ဖုန်းကိုနှိပ် drivers တွေကိုများများတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။
ကားများ, စပီကာဖုန်းကိုအများဆုံးဆဲလ်ဖုန်းအပေါ်စွမ်းရည်များနှင့်စျေးကွက်အပေါ်မှာလက်-အခမဲ့ဟက်အမျိုးမျိုးအတွက်ဘလူးတုသ်နှင့်အတူ, တကယ်ကဒီကားမောင်းဥပဒေကိုချိုးဖောက်မဆင်ခြေဆင်လက်ရှိသေး၏။
သငျသညျကားမောင်းနေစဉ်သင်၏နားမှဖုန်းကိုင်ပြီးဘယ်တော့မှအကြောင်းကိုကောင်းသောနေရင်တောင်သူကဝန်ခံ: ဒါဟာသင်လမ်းပေါ်မှာဆိုရင်နေချိန်မှာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမှာဆင်းရှာဖွေနေခုခံတွန်းလှန်ဖို့တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲတဲ့ပါပဲ။ Connecticut ပြင်းပြင်းထန်ထန်, စာပို့တောင်းဆိုနှင့်ပိုပြီးအဘို့လက်-ကျင်းပဆဲလ်ဖုန်း၏ယာဉ်မောင်း '' အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်သောနောက်ထပ်အာရုံပြံ့လှငျ့မောင်းနှင်မှုဥပဒေများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ စာသားနှင့် 2015 ခုနှစ်တွင်ကားမောင်းနှိမ်နင်းစဉ်အတွင်းအချို့သောယာဉ်မောင်းများဟာသူတို့ရဲ့ဖုန်းများပေါ်တွင်ပန်ဒိုရာရေဒီယိုဘူတာရုံပြောင်းလဲနေတဲ့အဖြစ်ထင်ရသောအန္တရာယ်ကင်းအဖြစ် infractions များအတွက်လက်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
သင်တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူကပျြအအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေတာကိုရှောင်ရှားကူညီရန်ဒီမှာ Connecticut တွင်ဆဲလ်ဖုန်း, ပညတ်တရား၏သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုအမြန်ပြန်လည်သုံးသပ်င်:
လက်-ကျင်းပသည့်မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းသုံးပြီးဖုန်းခေါ်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စဉ်အဘယ်သူမျှမလူတစ်ဦးတစ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအပေါ်သို့ (မည်သည့်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အခြားအများပြည်သူအဝေးပြေးလမ်းမကြီး, လမ်း, လမ်း, Avenue, လမ်းကြား, သည့်ကားလမ်း, Parkway) တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြမည်။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်၏နားအနီးရှိဆဲလ်ဖုန်းကိုင်ထားလျက်တရားတော်ကိုသငျသညျခေါ်ဆိုမှုအတွက်စေ့စပ်နေကြတယ်ယူဆတယ်။
တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ် operating ပညတ်တရား၏ချိုးဖောက်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်နေချိန်မှာသူကိုအမျိုးအစားများကိုတစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်၏အအော်ပရေတာတစ်ဦးလက်-ကျင်းပသည့်မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းအီလက်ထရောနစ်ကိရိယာနှင့်အတူစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုပို့ပေးသို့မဟုတ်ဖတ်တယ်။
အသက် 16 သို့မဟုတ် 17 နှစ်နေသောယာဉ်မောင်းပင်တို့သည်လက်-အခမဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းအတူဆဲလ်ဖုန်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းအီလက်ထရောနစ်ကိရိယာ၏မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမသုံးနိုငျသညျ။ သြဂုတ်လ 1, 2008 ကဒရိုင်ဘာအသက် 16 သို့မဟုတ် 17 ကားမောင်းနေစဉ်သူတို့ရဲ့လိုင်စင်ဆဲလ်ဖုန်းသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ် device ကိုအသုံးပြုဆိုင်းငံ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဤပညတ်တရားကိုရန်တဦးတည်းခြွင်းချက်ဆဲလ်ဖုန်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းအီလက်ထရောနစ်ကိရိယာဆေးရုံ, 911 မှအရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ကားမောင်းနေစဉ်ဒီတော့ရှေ့ဆက်သွားနှင့်သင်၏ဖုန်းကိုသုံးအရေးပေါ်အခြေအနေ၌မဆိုအသက်အရွယ်တစ်ဦးယာဉ်မောင်းများကဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့ရုံးကိုအသုံးပြုစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည် တစ်ဦးကျန်းမာရေးဆေးခန်း, လူနာတင်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်မီးသို့မဟုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာန။
Connecticut တွင်ပညတ်တရား၏ရည်ရွယ်ချက်, မိုဘိုင်းအီလက်ထရောနစ် device ကိုမဆိုလက်-ကျင်းပသို့မဟုတ်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ကိရိယာစာမျက်နှာကိရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ထောက်အပါအဝင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောပုဂ္ဂိုလ်များအကြား data ကိုဆက်သွယ်ရေးပေးနိုင်စွမ်းသည်အခြားခရီးဆောင်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်, လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာ, ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကို disk ကိုကစားနိုင်စွမ်းကြောင်းကိုပစ္စည်းကိရိယာများ, ဒါမှမဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံတွေယူသို့မဟုတ်ကူးစက်ထားတဲ့အပေါ်ကိရိယာများ, ဒါမှမဟုတ် သိ. မဆိုပေါင်းစပ်ပေမယ့်မဆိုအသံပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ခုသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်တပ်ဆင်မဆိုပစ္စည်းကိရိယာများမပါဝင်ပါဘူး ထိုကဲ့သို့သောမော်တော်ယာဉ်၏နောက်ဘက်ထိုင်ခုံများတွင်ခရီးသည်တို့အားဤသို့သောမော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖျော်ဖြေရေး၏အော်ပရေတာမှအညွှန်း, အရေးပေါ်အကူအညီများပေးအပ်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။
မီဒီယာလွှတ်ပေးရန်အတွက်, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြည်နယ်ရှေ့နေခရစ္စတိုဖာအယ်လ် Morano "ဤပညတ်တရား၏ရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ " ဟုပြောသည် ထို့အပြင်သူသည်ပြည်နယ်အရာရှိတွေကဆဲလ်ဖုန်းဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်. အများပြည်သူပညာပေးအချိန်ကြာမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်ကဆိုသည်။
သငျသညျပညတျတရားနှင့်အတူဒုက္ခကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့မတိုင်မီအခုသင်နေတဲ့ကိုလက်နှင့်လွတ်ဆဲလ်ဖုန်း device ကိုရတဲ့နေဖြင့်လုပ်ရတဲ့နှင့်စျေးကြီးပြစ်ဒဏ်များအများကြီးရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင် Connecticut တွင်အဆိုပါပြစ်ဒဏ်များထည့်သွင်းစဉ်းစားရသောအခါဆပ်ဖို့သေးငယ်တဲ့စျေးနှုန်းရဲ့တစ်ဦးပထမဦးဆုံးပြစ်မှုအတွက် $ 150, တစ်စက္ကန့်များအတွက် $ 300 အပေါင်းတို့နှင့်တကွနောက်ဆက်တွဲပြစ်မှုများများအတွက် $ 500 ။ သငျသညျဆိုပါက စာပို့ခြင်းနှင့်ကားမောင်းနေစဉ်တစ်ဦးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားစေ , သင်ပြစ်မှုဆိုင်ရာစွဲချက်, ဒဏ်ငွေနှင့်သင့်သြတ္တပ္ပစိတ်ကိုလှုပ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်တဲ့အလေးချိန်ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
Stonington, မှန် CT အတွက်တစ်ဦးကရှုခင်းသာနှင့်ချောင် Little ကသဲသောင်ပြင်
လူးဝစ် '' နေ့လည်စာသွားရောက်ကြည့်ရှု: အဟမ်ဘာဂါ၏မွေးရပ်မြေ
နှစ်ဦးကသစ်ပင်များအင်းမြား: A Foxwoods ဟိုတယ်
ဂရန်း Pequot မျှော်စင်: တစ်ဦးက Foxwoods ဟိုတယ်
သင်ဟာတစ်ဦးက Spa မှာ Botox & အခြား Injection Get သငျ့သလော
New Orleans တွင် Cajun နှင့်ဇားဒက်ကိုတေးဂီတတေးဂီတကိုနားထောငျကွဖို့အဘယ်မှာရှိ
သငျသညျ Die ခင်မှာ San Diego မှများတွင်လုပ်ပါမှ 25 အရာ
Madame Tussauds နယူးယောက်ဖယောင်းရုပ်ပြတိုက်
ကယ်လီဖိုးနီးယားအနီး Los Angeles မှာထိပ်တန်းပျားရည်ဆမ်းခရီးဦးတည်ရာနေရာများ
ဂရိတ်ဟိုတယ်၌ဝန်ဆောင်မှု၏ထိပ်ဆုံး 10 ရမယ်
San Diego မှအတွက်အကောင်းဆုံးပျိုးခင်းမှတစ်ဦးကဥယျာဉ်မှူးရဲ့လမ်းညွှန်